Lahatsoratra momba an'i Hong Kong
Ahoana ny fomba hahitanao asa any Hong-Kong?
Novambra 26, 2020 Antika Kumari Hong Kong, asa
Hong Kong dia manome vinavinan'ny asa tsy manam-paharoa maro ho an'ny ex-pats, ny ivon-toeran'ny sehatra ara-bola manerantany, ary ny sampanan-dalana eo Atsinanana sy Andrefana. Ary na dia mila manana tolotra asa hanombohana miasa any Hong Kong aza ianao, dia misy asa azo atao
Visa Hong Kong ho an'ny karana
Oktobra 21, 2020 Maitri Jha Hong Kong, visa ho
Betsaka ny zava-manintona sy fahafahana manao fizahantany malaza eto Hong Kong. Hahita zavatra tsy tambo isaina ho hita sy hatao ianao. Ireo teratany avy amin'ny firenena sy faritany 170 dia afaka mitsidika an'i Hong Kong tsy mila visa. Ary, miankina amin'ny zom-pirenena,
Oniversite 10 tsara indrindra any Hong Kong
Jona 17, 2020 Antika Kumari Hong Kong, fianarana
Manodidina ny 22 ny anjerimanontolo nahazo diplaoma any Hong Kong. Valo amin'izy ireo no be mpampiasa ary ny sisa amin'ireo oniversite dia mitokana. Ho an'ny ankamaroan'ny kilasy, dia mampiasa anglisy daholo ny oniversite valo ao Hong Kong. Ity ambany ity ny lisitry
Hopitaly tsy miankina tsara indrindra any Hong Kong
Aprily 12, 2020 Shubham Sharma fahasalamana, Hong Kong
Hong Kong dia iray amin'ireo tanàna salama indrindra manerantany. Ny sampan-draharahan'ny fitsaboana any an-tanàna dia nitazona kalitao avo lenta. Ny androm-piainan'i Hong Kong dia avo indrindra eto an-tany izay manodidina ny 85 taona. An'i Hong Kong
Fanabeazana sy sekoly any Hong Kong !!
Febroary 24, 2020 Karuna Chandna Hong Kong, am-pianarana
Ny sekoly tsara indrindra any Hong Kong! Ny rafi-pampianarana any Hong Kong dia mifototra amin'ny rafitra UK. Ary ny Biraon'ny Fanabeazam-pirenena sy ny Sampan-draharaha misahana ny fiahiana ara-tsosialy no mitondra azy. Betsaka ny sekoly iraisam-pirenena any Hong Kong. Afaka izy ireo
Inona no atao hofan-trano sy vidim-piainana any HonKong
Febroary 19, 2020 Shubham Sharma Hong Kong, trano
Hongkong no toerana mafana indrindra ary ao amin'ny lisitry ny mpitety dia. Saingy tianao ny tanàna ka tianao honina ao fa tsy tokony hanana asa tsara ianao amin'izay azonao zahana ny fomba
Midika ho rafi-pitaterana any Hong Kong
Febroary 17, 2020 Antika Kumari mandehana, Hong Kong
Ny vidin'ny fitaterana ao Hong Kong dia afaka manome fahafaham-po ny zavatra rehetra ilain'ny mpizahatany. Ny fitaterana ny tany dia ahitana ny MTR, taxi, bus, minibusses, ary làlana. Ary koa ny serivisy serivisy eo anelanelan'i Kowloon sy ny Nosy Hong Kong, ary amin'ny Nosy Outlying.
Hotely mahafinaritra any Hong Kong
Febroary 10, 2020 Maitri Jha Hong Kong, trano fandraisam-bahiny
Mitady hotely mahafinaritra any Hong Kong ve ianao? Hong Kong dia toerana iray amin'ny sasany amin'ny tsara indrindra sy ny trano fandraisam-bahiny ihany koa. Hong Kong dia iray amin'ireo toby fizahan-tany tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Hong Kong dia manana
Febroary 10, 2020 Antika Kumari Hong Kong, Travel
Hong Kong dia iray amin'ireo kapitenin'ny foibe azo hanina manerantany. Any an-dàlana dia misy tanimbary manaitra, anisan'izany ny tendrombohitra tsara tarehy sy ny kianja lehibe. Ny fotoana tsara indrindra hitsidihana an'i Hong Kong dia amin'ny volana tapaky ny volana desambra ka hatramin'ny Febroary. Rehefa
Mitsidika an'i Hong Kong? Tsy maintsy mandeha any amin'ireo toerana ireo !!
Febroary 6, 2020 Karuna Chandna Hong Kong, zavatra atao
I Hong Kong dia fantatra amin'ny tanàna mahavariana. Ary toerana hofidina amin'ny fivarotana lafo vidy. Zavatra vaovao sy miavaka manodidina ny zorony rehetra. Izy io dia mety ho tempoly taloha na fivarotana mivarotra ny fitaovana elektronika farany. Nitsidika an'i Hong